July 27, 2020 1928
शास्त्र अनुसार हरेक महिना’को आ–आफनै महत्व छ । यसमा साउन महिनाले अझ धेरै नै महत्व राख्छ । पौराणिक मान्यता अनुसार यो महिनालाई भगवान शिवको महि’ना मानिन्छ । साउन महिनामा भगवान शिवको पुजा आराधना गरेमा म’नकामना पुरा हुन्छ भन्ने जन–विश्वास रहदै आएको छ ।
दोस्रो जन्ममा देवी सतीले पार्वतीको रुपमा राज्य हि’माचल र रानी मैनाको घरमा जन्म लिएपछि उनले यस अवस्था देखि नै महादेवलाई बरपाउ भनी साउन महिना देखि निरहार ब्रत बसेर महादेवलाई प्रसन्न पारी वर प्राप्त गरे’को कथा शास्त्रमा उल्ले’ख गरिएको छ ।
साथै यसै समयदे/खि भगवान शिवले यो महि’नालाई अति नै प्रिय म’हिना मानेको बुझिन्छ । यसमा साउनको सोमवार झनै प्रिय छ । यस महिनामा साउ’न भने जस्तै बारहरुमा पनि सोम’वार भगवान शिवको मन पर्ने वा’र हो ।
तर्सथ शिवको वर्त आराध’ना सोमवार नै गर्ने गरिन्छ । साउन महिनामा नीलकण्ठ भगवानलाई ज’लाभिषेक तथा रुद्राभिषेकको ठूलो महादेव रहेको पाइन्छ । वेद मन्त्र उच्चारणको साथमा शंकर भगवान’लाई जल अर्पित ग’र्नु साधकको आध्यात्मिक जीव’नका लागि महाऔषधिको रूपमा प्रभाव पर्छ ।
जलमा विष्णु भगवानको बा’स हुन्छ । जललाई नार पनि भनिन्छ । जल याने नारमा बास गर्नु हुने भगवान् भएका’ले विष्णुलाई नारायण भनिएको हो भन्ने कथन पाइन्छ ।
साउन महिनामा महिला दिदिबहिनीहरुले आफुलाई सोह्र श्रृंगार गरी हरियो, रा’तो र पहें’लो रंगको चुरा सारी लगायत पहिरियर अझ सुन्दर देखिन्छन् । यो महिनामा हरियो रंगको प्रयोग बढि नै गरिन्छ । हामी हरियो रंग’ले प्रकृतिको आभाष व्यक्त गर्छ भन्ने बुझछौं ।
जसरी रातो रंगलाई बिवाहित दिदि’बहिनीहरुको जीवनमा सुख र सौभाग्यको’ प्रतिक मान्निछ । ठिक त्यसैगरी हरियो रंगलाई शिव भगवानको आर्शिवादको प्रतिक मानिन्छ । साउनमा हरियो चुरा, लुगा र गरगहनाहरुमा’ शिव भगवानको अर्शिवाद रहन्छ भन्ने आस्था रहेको हुनाले यो महिनामा हरियो रंगलाई बढि मान्य’ता दिइएको छ ।
धर्मको हिसाबले पनि यो महिना भग’वान शिवको हु’नाले उनी योगी थिए र ‘हर हमेशा प्रकृतिको सुन्दरता बिच बस्न रुचाउन्थे र यसैकारण हरियो रंगले शिव भगवान प्रभावित भइ आ’र्शिवाद दिने विश्वास गरिन्छ । अर्को रु’पले हेर्दा साउन महिना वर्षा ऋतु पनि हो ।
यस महिनामा नयाँ पालुवाहरु उम्रिइ चारैतिर हरियाली छाएको हुन्छ र य’स महिनामा हरियो रंगका चुरा टिका लुगा लगाई आफुलाई श्रृंगार गर्दा प्रकृतिको आर्शिवाद पाइन्छ भन्ने आ’स्था र विश्वास रहेको पाईन्छ ।
साउन महिनाको सोमबार शिव मन्दि’रहरुमा हिन्दू नारीहरुले आफ्नो सौ’भाग्य र असल पतिको कामना गर्दै दर्शन तथा जल चढाउने गर्दछन । साउनका सोमबारभरि चोखो बसी व्रत’ बस्ने तथा चोखो खाने चलन छ ।’
साउनभरि हरियो, पहेंलो, रातो रंग’का ‘पहिरन, चुरा, पोते, नेलपोलिस, मेहन्दी आदि लगाई सोह्र श्रृंगार’मा सजिएर उपासना गर्ने चलन छ । हिन्दु धर्ममान्ने धेरै महिला साउनका सोम’बार’भरि व्रत बस्छन । साउने सोमबार विद्याका लागि पनि राम्रो मानिन्छ । कतिपयले सतीलाई प्रकृतिका रुपमा लिने भएकाले पनि साउनमा हरि’यो रंगको बढी महत्व छ ।
साउन महिनामा चुरा, टिका, गरगहनाका’ साथै हातमा महेन्दी लगाउने प्रचलन छ । मेहन्दीलाई नारीहरुको सौभाग्यको प्रतिक मानिन्छ । यसको साथै यस महिनालाई चाडपर्व भित्र’याउने महिनाको रुपमा मानिने हुनाले यो महिना विवाहित दिदिबहिनीहरुले सगुनको रुपमा महेन्दी लगाउने प्रचलन छ । नारी श्रृंगारमा सोह्र श्रृं’गार मध्य म’हेन्दीको पनि छुट्टै महत्व छ ।
पूजाको विधि यस्तो छ !
ऊं नमः शिवाय …नमः शिवाय ,.. शुभं शुभं
कुरू कुरू शिवाय नमः ऊं’ , नमो नीलकण्ठाय, ऊं पार्व’तीपतये नमः, ऊं पशुपतये नम:
सोमबारको दिन विहान सबेरै उठेर पूर्ण शरीर नुहाउनुहो’स् । नजिकको शिव मन्दिर गाई शिव, माता पार्वती र नन्दीलाई गंगाजल वा पवित्र जल अर्पित गर्नुहोस्। शिवलिङ्गमा चन्दनचामल, बेलपत्र र धतु’रोको फुल चढाउनुहोस्।
यस पछि पूजा सम्पन्न गर्नका लागि भगवान शिवलाई घिउ’ वा सक्खरको भोग लगाउनुहोस् र अन्तिममा धुप ,दिप बालेर आरती गर्नुहोस्। याद राख्नुहोस् तपाईको सकारात्मक सोँचविना कुनै पनि काम अधुरो हुन्छ । यसअर्थ दुखी गरि’बको सेवा, सम्मान, माया, सहयोग कायमै राख्नुहोस् ।’
Prevआज साउने सोमबार (१२ गते) भगवान शिवको दर्शन गर्दै तपाईंको राशिफल हेर्नुहोस्
Nextसाउन महिनामा किन लगाइन्छ हरियो चुरा र मेहन्दी ? यस्तो छ कारण: हेर्नुहोस्
भाइरल चियावालि भन्छिन्: अब यस्तै हो भने मर्नुबहेक अरु के उपाय रहन्छ र ! (भिडियो सहित)
होली खेल्ने क्रममा ग्या’ङ-फाइट हुँदा दुई जनाको मृ:त्यु, दर्जन बढी युवा बेपत्ता